IFTIINKACUSUB.COM: Sharciga xadhig iibsiga maxbuuska.
Sharciga xadhig iibsiga maxbuuska.
Iftiinkacusub.com: Dad badan ayaa waxa ay iswaydiiyaan su'aal ah"horta xadhig kasta oo maxbuus lagu xukumo ma loo iibin karaa ?misse iibsiga xadhiga maxbuusku sidiisaba waxa uu ku eeg yahay ama uu ku xadidan yahay dad gaar ah.
Runtii waa arin inta badan ay dadwaynahu ay iswaydiiyaan,marka laga xidho cid ehelkooda ah ama ay isgaranayaan ,iyo marka ay arini ka gasho garsoorka iyo maxkamadda ,waana arin u baahan in wax laga ogaado si ay dadku uga jaahil baxaan.
Horta qofkasta oo danbi gala,danbigaasi ha waynaado ama ha yaraado ,waxa uu kiiskiisu u qaybsamayaa Madani iyo Ciqaab iwm.Kiis kasta ama danbi kastaana waxa uu leeyahay ciqaab iyo abaal marin gaar ah,taasi oo la halmaasha hadba danbiga uu galay inta uu leeg yahay iyo kaalinta uu kaga jiro sharciga.
Hadaba goorma ayaa la odhankaraa qofka xadhiga ha loo iibiyo ama ganaax iyo lacag ha loogu badalo.Maskaxda waa in aad ku haysaa, marka uu yimaado xukun ama go'aan maxkamadeed waa xili qof markii hore eedaysane ahaa danbi lagu helay ama lagu waayay.
Hadaba xukunkasta oo Maxkamad kasoo baxa sidiisaba waa uu kala culus yahay ,sida ay danbiyaduba ay u kala culaysbadan yihiin.Sidaa awadeed go'aan kasta oo xaakin sharciyii uu soo saaray,xadhigiisuna uu gaadhayo Sanad iyo wixii ka yar,waxa ay ka dhigan tahay waa loo iibin karaa qofkii lagu xukumay,balse waxa doorashada iyo aqbalka iska leh garsooraha kiiskaasi gacanta ku haya.
Mararka qaar waxaa dhicikarta in xadhiguba uu ka yaryahay hal sano,hadana sharcigu diidaayo in loo iibiyo ama ganaax loogu badalo danbilihii,taasi waxa ay iman kartaa waa haddii danbiilaha looga cabsiqabo in uu danbigan uu galay marlabaad gali karo ama bulshadaba uu khatar ku yahay.
Sharciga iyo xeerarka sidiisaba kuma jirto qodob odhanaaya, waa in xukunkaa ganaax lagu badalaa,balse waxa awoodaasi ganaaxa sharcigu uu siinayaa qofka garsooraha ah ee kiiska gacanta ku haya.
Mararka qaar waxaa dhici karta ,in qofkuba uu galay danbi aad u yar,xadhiga uu mudaystayna uu yahay hal Bil oo qudha,taas lama odhanaayo xaq ayuu u leeyahay in loo iibiyo, balse garsooraha ayaa go'aankaasi iska leh,haduu doono ganaax lacag ayuu ugu badalayaa haddi kalana hal Bil ayuu Jeelka u dirayaa.
Hadal iyo dhamaan garsoonaha kiiska hayaa ayaa u madax banaan in uu aqbalo iibka xadhiga maxbuuska hadii uu xadhigu yahay mid ka yar hal sano.Arintani inta badan waxa ay ku saab san tahay qanuunka yaalla maxkamadaheena ee aan islaami ahayn.
Hadii la eego dhinaca shareecada islaamka,waxa aad u badan xoriyada Islaamku uu siiyay garsooraha wax ku xukumaaya shareecada Islaamka,waxaana la odhan karaa 100% waxa ay shareecada Islaamku ay ka furfuran tahay ,kana cadaalad badan tahay qawaniinka kale ee dibadaha inooga yimi.